Home News Bariga Afrika oo Waajahaya Weerarkii Ayax ee u Ba’naa 25kii Sano ee...
Bariga Afrika oo Waajahaya Weerarkii Ayax ee u Ba’naa 25kii Sano ee Tagay
Todobaadyadii ugu dambeeyay dalal badan oo ku teedsan Badda Cas waxaa soo galay ayax aad u tiro badan oo xaalufiyay dooggii.
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Cunnada iyo Beeraha ayaa sheegaysa in dhibaatada ka dhalatay ayaxaasi ay halis galinayso cunnadii gobolkan uu ku habsaday.
Hay’addu waxay ka digaysaa in haddii aanan wax laga qaban ayaxan uu is tari doono 500 oo jeer khasaaraha uu gaystana ay kordhi doonto wixii loo gaaro bartamaha sanadkan.
Waa duullaankii ugu darnaa ee ayaxa dalalka geeska Afrika muddo 25 gudahood.
Waxaa dalalka Kenya iyo Itoobiya ka socdaa dadaallo lagu buufinayo ayaxa lagagana saarayo dhul beereedyada uu ku habsaday.
Ayaxa ayaa sidoo kale dhibaato ka geystay dhul badan oo ku yaal dalka Soomaaliya in kasta oo aan wali la qiimayn khasaaraha rasmiga ah ee uu gaystay.